Kuvhara Bots Bad - Semalt Expert
Semalt nguva dzose anotarisa nzira dzekuvandudza mararamiro ayo, uye kambani inofara kuzivisa zvimwe zvinhu zvitsva zvekuchengetedza. Kukwanisa kwaro kudzivisa huipi hutsika hwakanaka uye bots hauna zvimwe. Izvi zvinoita kuti vatengi vawane mari yakawanda uye vanovhara motokari yepamusoro uye mabhoti kusvika pamwero mukuru - ubiquiti unifi video camera manual. Kunyanya, iwe unogona kubvisa nyore nyore scrapers uye spider uye kuvadzivisa kuti vasawonyana Semalt yefuma. Ndiyo chete chinhu chinowanikwa kune vose vatengi, uye iwe unogona kuzvigonesa kubva padhidhibhodhi yako. Hapanazve mabhu anokanganisa data yako, uye haufaniri kutarisa imwe kambani.
Kana zvasvika kune internet, kune marudzi maviri eBob: bots akaipa uye bots bots. Alexander Peresunko, nyanzvi yeSemalt, inotaura kuti imwe ye mienzaniso yakanakisisa yebhoti yakanaka ndiyo Googlebot. Ndiyo yeGoogle yebhu yekukwezva bot iyo inogona kukwikwidza nyaya yako uye zvinyorwa zvitsva, kuwedzera kukosha kwekushanda kwewebsite yako yese. Kunyanya, inobatsira nzvimbo yako kuti iwane indexed mu tsvaga injini migumisiro..Chimwe chevhu inokuvadza kana yakaipa Cheesebot. Vose mabhati akaipa anosanganisira zvikwepa, scrapers, uye spider zvinokuvadza pamapeji ako ewebhu. Ivo, zvisinei, haisi nguva dzose ine ngozi asi kazhinji vanokamba nzvimbo dzenyu zvakashata uye vanodya Semalt bandwidth, vachitora server mashizha. Kunze kwezvo, bhu rakaipa rinoba zvinhu zvako uye rinonyora zviri mukati rose pawebhu. Somugumisiro, iwe unogona kuona mazamu emakopi ako ehupenyu kana iwe Google iyo.
Zvinogoneka kuvhura mabhogi akaipa nemabhobho ako.txt mafaira, anogadziriswa kubva kuAtalt account. Zvisinei, haugoni kubvisa robots ose kana bots kushandisa iyi faira, izvo zvinoreva kuti iwe uri kuita basa pane sevheji yepamusoro zvakare. Semalt inoita kushandiswa kweuchenjeri kwemashoko akazara emhando mbiri dzakaipa uye mabhii akanaka uye inovhara mabhodhi akaipa kuburikidza neMaketani avo Anoshanda-Agent. Saka rangarira, kana iwe uchida kuita kuti webhusaiti yako ive yakachengeteka uye yakachengetedzwa, unofanira kudzivirira maIndaneti evanhu vose vakaipa nokukurumidza.
Nzira yekudzivirira sei mabhoti akaipa
Unogona kugonesa bhata yakaipa yebhodhi yekutema nekupinda mune account yako nekunyanya kunzvimbo dzakasiyana. Pano iwe unofanirwa kuvhara Hora uye sarudza Show Advanced Advanced Settings sarudzo. Kana uchinge wasarudza chisarudzo ichocho, danho rinotevera nderekupora pasi uye kudzivisa mabhoti ose akaipa. Dzvanya paIbvumira bhodhi uye chengetedza zvese zvaunoshandura usati wavhara kubva kubhuku. Apo mabhii akaipa akavharwa, anorova kubva kune maIndaneti asina kururama haambovi chikamu chewebsite yako. Ichi chitsva chekuchengeteka chakagamuchirwa neIESG uye chinoda kuita kuti webhusaiti yako ive yakachengeteka uye iri nani kudarika kare. Hapana chekugadzirisa nyaya yakaperekedzwa, uye iwe unogona kudzivisa mazita akawanda eI IP sezvaunoda.